तालिबान शासनमा अब अफगानी चेलीहरू फेरि क्रिकेट खेल्न सक्छन्? « AayoMail
तालिबान शासनमा अब अफगानी चेलीहरू फेरि क्रिकेट खेल्न सक्छन्?
2021,5 September, 8:28 am
तालिबानले अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण जमाएर नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहँदा त्यहाँ रहेका महिलाहरुमा एक प्रकारको डर छाइरहेको छ। त्यो डर महिलामाथि हुने चरम दमनको ‘सरिया’ कानुन हो।
तालिबानले महिलामाथि भेदभाव नगरिने बताइरह‍े पनि कतिपय ठाउँमा महिलालाई स्कुल जान बन्द गरिएका समाचार आएका थिए। सरिया कानुनमा महिलामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ, उनीहरु एक्लै बाहिर निस्कन पाउँदैनन् भने पढ्न पनि पाउँदैनन् न त बाहिर गएर काम नै गर्न पाउँछन्।
सबैमा अहिले एउटा जिज्ञासा छ, ‘अफगानी महिला क्रिकेटर कहाँ छन् होला, के गर्दैछन् होला?’ भन्ने।
महिला क्रिकेटहरुको अवस्था दयनीय छ। उनीहरुले आफूलाई लुकाएर राखेका छन्।
एसेलले आफूसहित अफगानिस्तानकी महिला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कैयौं खेलाडी आफूलाई लुकाइ रहेकी छिन्। एसेल उनको असली नाम होइन।
काबुलमा तालिबानका सदस्यहरूको नजर अफगानिस्तानको महिला क्रिकेट टिममाथि छ।
काबुलको स्थिति बिग्रिएको र क्रिकेट वा अन्य खेल खेल्ने महिलाहरू अब यहाँ सुरक्षित नरहेको एसेल बताउँछिन्।
‘हामी व्हाट्सएप ग्रुपमा हरेक रात आफ्नो समस्या र साझा योजना बनाउने विषयमा कुरा गर्छौं। हामीले गर्दा ठीक हुन्छ, यसबारे बढी कुरा हुन्छ। हामीहरू सबैजनाको भरोसा टुटिसकेको छ,’ एसेलले भनिन्।
गत महिनाको दोस्रो साता तालिबान काबुलमा प्रवेश गर्‌यो। त्यतिबेलादेखि एसेल घर बाहिर निस्कन पाएकी छैनन्। आफ्नो क्रिकेट ‘किट’ पनि हटाइदिएकी छिन्। आफ्नो एक साथीलाई काबुलमा निसाना बनाइएको उनी सम्झिन्छिन्।
उनी भन्छिन्,‘जुन गाउँमा क्रिकेट खेलिन्छ, त्यहाँ तालिबानसँग मिलेर काम गर्नेहरूलाई थाहा छ। जब तालिबानले काबुललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो, उनीहरूलाई धम्की दिइयो। फेरि क्रिकेट खेले ज्यान गुमाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले भनेका छन्।’
तकवा(परिवर्तित) नाम वर्षौंदेखि अफगान महिला क्रिकेट टिममा छिन्। काबुललाई तालिबानले नियन्त्रणमा लिएपछि उनी अफगानिस्तान छोड्न सफल भइन्। चिनिने डरले उनी घर बदलिइ रहिन्।
तालिबानले उनका बुवालाई फोन गरेको थियो। तर, उनले छोरी सम्पर्कमा नरहेको बताए।
तकवा भन्छिन्,‘भविष्यमा के हुन्छ, यसबारे म अब सोच्न चाहेको छैन। तालिबान जब काबुलमा आयो, एक सातासम्म मैले खान पिउन छोडिदिएँ। राम्ररी सुत्न पनि पाइनँ। म केवल आफ्नो बारेमा मात्रै सोचिइरहेको थिइनँ। म अन्य महिला क्रिकेट खेलाडीबारे पनि चिन्तित थिएँ। उनीहरू आफ्नो जीवन र पढाइ बर्बाद गरिहेका छन्। अफगानिस्तानका लागि खेल्न पाउँ भनेर कतिपयले त विहे पनि गरेका छैनन्। म उनीहरूका लागि ज्यादै चिन्तित छु।’
एक अरू पूर्वखेलाडी हरिर (परिवर्तित) नामले अफगानिस्तानमा महिलाले क्रिकेट खेल्नुको अर्थ विकेट लिनु र रन बनाउनुभन्दा बढी छ।
उनी भन्छिन्,‘जतिबेला म खेलिरहेका थिएँ, एक मजबुत महिला भाव मनमा हुन्थ्यो। म भित्र आत्मविश्वास भरिएको थियो। र, आफैंमाथि गर्व हुन्थ्यो। महिलाको रूपमा जे पनि गर्न सक्छु जस्तो लागेको थियो।’
तर, हरिर र अफगानिस्तान महिला टिमका बाँकी खेलाडीहरूको सपना सायद सत्य बनेर उभरिने सम्भावना क्षिण भइसकेको छ। एक वर्षअघिसम्म उनीहरूको मनमा आसा र भरोसा थियो। तर, अब उनीहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि डराएका छन्।
अफगानिस्तान क्रिकेटको कथा
अफगानिस्तानमा क्रिकेटको उदय कुनै जादुई कथा जस्तै छ। तालिबान सत्ताबाट हटेको एक वर्षपछि आइसिसीले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डलाई मान्यता दिएको थियो। तालिबान गइसकेपछि अफगानिस्तानमा खेलका गतिविधिहरू सुरू भयो।
क्रिकेटका लागि अफागनिस्तानमा सन् २००० तिर चाहना बढ्यो। अफगानिस्तानको पुरुष क्रिकेट टिम विश्वकपसम्म पुग्यो। २०१७ मा टेस्ट क्रिकेटको दर्जा प्राप्त ग¥यो अफगानिस्तानले। रासिद खान र मोहम्मद नबीजस्ता खेलाडी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति कमाइसकेका छन्।
अफगानिस्तानमा राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम सन् २०१० मा बन्यो। यसको विरोध पनि भयो। सुरूमा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डले महिला क्रिकेट टिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा भाग लिन अनुमति दिएन।
बोर्डले तालिबानको डर देखायो। २०१२ मा अफगानिस्तानको महिला टिमले ताजिकिस्तानमा ६ क्षेत्रीय टिम सहभागी टुर्नामेन्टमा भाग लियो। र, त्यहाँ उनीहरूले जित पनि हासिल ग¥यो। तर, दुई वर्षपछि फेरि संकट आयो। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डले तालिबानसँग खतरा रहेको बतायो।
अफगानिस्तानको महिला क्रिकेट टिम टुटे पनि महिलाहरूले आफ्नो खेललाई रोकेनन्। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डसँग अहिले पनि केही कर्मचारीहरू छन्। जसको जिम्मेबारी महिलाहरूका लागि म्याचको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। तर, महिला क्रिकेटहरूको समस्या बढ्दै गयो।
हरिर भन्छिन्,‘अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डभित्र मद्त गर्ने कमै मानिस छन्। रोइकराइ गरेपछि मात्रै उनीहरूले म्याचको आयोजन गराउन तयार हुन्छन्।’
खुसी व्यक्त गर्न पाउँदैनन् महिला खेलाडी
‘म एक बलर हुँ। तर, विकेट लिएपछि खुसी व्यक्त गर्न छुट मलाई छैन। किनभने पुरुषहरू मलाई हेरिरहेका हुन्छन्,’ हरिर भन्छिन्।
‘मलाई आफ्ना भावनाहरू नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ। म हल्ला गरेर आफ्नो टिमको हौसला बढाउन पाउँदिन्। खेलीरहेको बेला साथीहरूलाई समर्थन गर्ने छुट मलाई छैन। म खुसियाली मनाउन सक्दिन।’
पुरुष टिमले राम्रो प्रदर्शन गरेपछि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डले महिला क्रिकेटमाथि ध्यान दिन सुरू गरेको थियो। आइसिसीको नियमअनुसार क्रिकेट टिमा १२ जना खेलाडी हुनुपर्छ। २०१७ मा अफगानिस्तानले राष्ट्रिय टिम बनाउन यो सर्त पूरा ग¥यो। २०२० मा २५ जना महिला खेलाडीसँग सम्झौता गरिएको थियो।
१० महिनाअघि अफगानिस्तानको महिला टिमले आशाको एउटा किरण देखेको थियो। तर, बढी दिनसम्म टिक्न पाएन।
तालिबानको पछिल्लो शासन अर्थात १९९६ देखि २००१ का बीच केटी र महिलालाई शिक्षामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। आठ वर्षमाथिका केटीलाई स्कुल जान रोक थियो। महिला घर बाहिर काम गर्न जान सक्दैनन् थिइन्। घर बाहिर निस्कन साथमा एकजना पुरुष हुनु अनिवार्य थियो।
तालिबानले यसपटक आफ्नो एक राम्रो तस्बिर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, खेलको क्षेत्रमा महिलाहरूका लागि राम्रो काम हुन्छ भन्ने गुन्जायस कमै छ।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डका मुख्य कार्यकारी अधिकारी हामिद शिनवारीले तालिबानले पुरुष टिमलाई समर्थन गरेको बताएका छन्। पुरुष टिमलाई नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियासँग टेस्ट म्याच खेल्ने अनुमति दिइएको उनले जनाएका छन्।
तर, महिला टिमलाई तालबिानले खेलका लागि अनुमति नदिने उनको आशंका छ। तर, यसकारण अफगानिस्तानले आइसिसीको सदस्यता गुमाउनसक्ने जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ।
अफगानिस्तानको महिला क्रिकेट टिम तालिबानको शासनबाट बाहिर निस्कन खोजेका छ, जसरी ५० अफगानी एथलेटहरू निस्केका थिए।
आइसिसीका एक प्रवक्ता भन्छन्,‘हामी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डको सम्पर्कमा छौं। त्यहाँको सम्पूर्ण स्थितिमाथि हाम्रो नजर छ।’
तर, तकवा भन्छिन्,‘आइसिसी महिला क्रिकेटरसँग सम्पर्कमा छैन। र, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डले पनि हाम्रो भलाइका लागि खासै रूची देखाएको छैन।’
तालिबानको कब्जापछि अजिजुल्लाह फजलीको नियुक्तिबारे उनी भन्छिन्,‘आइसिसीले कहिल्यै पनि हामीलाई सहयोग गरेन। महिला क्रिकेटका विरोधीसँग मात्रै आइसिसीले कुरा गरिरहेको छ। जस्तै अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डका नयाँ प्रमुख।’
महिलारूले त्यागेका छैनन् भरोसा
स्थिति प्रतिकूल छ। तर, फेरि टिम एकजुट हुनसक्ने भरोसा एसेललाई छ। आफ्नो सपना र भविष्यबारे कुरा गर्दा हरिर उत्साहित हुन्छिन्। उनी भन्छिन्,‘म एक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटर बन्न चाहेकी छु।’
‘म एक बलियो अफगान महिला बन्न चाहेको छु, जसले मानिसको जीवनमा परिर्वतन ल्याउन सकोस्। म अफगान केटी र महिलाका लागि प्रेरणा बन्न चाहेकी छु। अफगानिस्तानका केही पुरुषहरूको सोच बदल्न सकुँ मेरो चाहना छ। म आफूमाथि गर्व गर्न चाहेकी छु, अरू केही होइन,’ उनले भनिन्।
उनी भन्छिन्,‘अफगान संस्कृतिमा कतिपय बाधाहरू छन्, जसले महिलालाई खेल्नबाट रोकेको छ। महिला कमजोर हुन्छन् र क्रिकेटर बन्नु हुँदैन यहाँको संस्कृतिले भन्छ। उनीहरू विहे गरोस्, बच्चालाई जन्म दिओस् र घरको काम गरोस्। श्रीमानको हेरचाह गरोस्, महिलाहरूले गर्नुपर्ने काम यही हो यहाँ।’
‘मेरो परिवारमा पनि कतिपयले भन्छन मैले खेल्न बन्द गरिदिनुपर्छ। किनभने इस्लामी संस्कृतिको हिसाबले महिलाले क्रिकेट खेल्नु ठीक मानिँदैन। तर, मलाई क्रिकेट मन पर्छ। यहाँ परिस्थिति ज्यादै खराब छ। तर, हाम्रो भरोसा मरेको छैन। यदि हामीलाई यस देशबाट निकालेर अरू ठाउँ लगिए, हामी फेरि खेल्न सुरू गर्न सक्छौं।’ बिबिसीबाट।